Inona no ataonao raha misy mangalatra ny bisikiletanao? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Nangalatra ny bisikiletako tato ho ato - fanapahan-kevitra azo ampiharina
Nangalatra ny bisikiletako tato ho ato - fanapahan-kevitra azo ampiharina
Inona no ataonao raha misy mangalatra ny bisikiletanao?
Inona no hatao raha ny bisikiletanaodiaangalarina
Mifandraisa amin'ny polisy.Raha ny bisikiletanaodiaangalarina, mila mametraka tatitra ataon'ny polisy ianao.
hisoratra anaranany bisikiletanao. na diaRAHAtsy nisoratra anarana ianaony bisikiletanaotalohan'izayangalarina, ianao dia afakaAzaka rehefa afaka.
Fivarotana gadona any an-toerana. Mety tsy izanyAzamisy mahatsara anao, fa tsy maharary ny manandrana.
Zahao ny doka eo an-toerana.
(mozika manaitaitra) (mozika tsy fantatra) - Alohan'ny hahatongavako amin'ilay lahatsoratra tena izy, tiako fotsiny ny manasongadina fa tsy tetika fampitahorana na zavatra hafa toa izany izany, saingy indrisy manana olona tsy mahay mandanjalanja eo amintsika maniry hangalatra ny avonavona sy fifaliana, ary raha toa ahy ianao dia niasa tsara sy niasa mafy mba hahafahanao mitahiry mba hividy azy. Androany dia mijery hacks vitsivitsy izahay mba tsy hanananao rojo antitra lehibe sy padlock miaraka aminao amin'ny dianao fiofanana. Fanampin'izany, ity lahatsoratra ity dia tena fanandramana fotsiny hampiatoana ilay mpangalatra mpanararaotra mihoatra ny mpomba azy satria raha ny marina, dia hamakivaky an'izay rehetra apetrakao amin'ny lalany izy ireo. (Hira mahafinaritra) Izany indrindra no itiavan'ny bisikileta amin'ny kafe.
Tian'izy ireo koa ny kafe, ary tiany koa ny mofomamy. Ka raha mankany amin'ny kafe ianao, maninona raha avela amin'ny bisikileta avo indrindra azo atao ny bisikiletanao. Ka ilay rojo vy goavambe sy ilay kely kely dia mitsambikina any aoriana, ka raha misy olona manatona ka manandrana mandray azy, raha tsy hoe miorina toy ny sprinter izy ireo dia mety tsy ho fantatr'izy ireo ny fomba fiasan'ny paipaika ary tsy hidirany mahaiza misintona hery ampy ary azonao ajanona fotsiny izy ireo toy izany! (mozika mifono mistery) (mozika misongadina) Izao ny iray manaraka azoko avy amin'ny naman'ny fantsona Adam Hansen rehefa nahita zavatra tao amin'ny pejiny Twitter aho.
Ny zavatra ataony rehefa mijanona ao amin'ny kafe izy na mijanona vetivety fotsiny amin'ny kodiarana familiana dia esoriny ny kodiarana avy eo am-pivoahana, atosiny fotsiny mandroso na mihemotra izy io mba hipetraka eo ambanin'ny kaliperin'ny kaliperitra na ny fork. , izay midika fa raha misy manandrana mangalatra azy rehefa manandrana mahazo azy izy ireo, dia miankohoka fotsiny izy ireo, miaraka amin'ity bisikileta ity no anaovako frein mba hahafahanao manala ny axe-nao fotsiny, izay midika fa raha manandrana ny mpangalatra mitaingina azy ireo, manantena aho fa hianjera ny kodiarana eo aloha ary hipetraka amin'ny tavanao izy ireo, raha tsy izany dia azonao atao ihany ny mamoaka ny kodiarana any aoriana avy ao amin'ny dropout any, tadidio fotsiny ny famerenana ireo axles mazava ho azy, izay tsy afaka nahazo fotsiny marary ianao, nefa koa avy any am-paosinao, mety misy fahasimbana amin'ny bisikileta. (mozika tsy fantatra) (mozika mahafaly) Raha manana freins de rim mahazatra ianao dia mazava ho azy fa afaka manome anao torohevitra vitsivitsy aho mba hanalefaka fotsiny ny fomba famotsorana haingana amin'ny kaliperista, hamafiso tanteraka ny fanamboarana barika ary avy eo andramo hidiana indray ny famotsorana haingana mekanika, miaraka aminy ara-bakiteny, raha misy manandrana miainga amin'ny bisikileta dia eny an-dalana izy ireo no mihidy frein. Tsy mora izany fa ny tiako indrindra, fa mbola hitako ny olona manao azy. Raha atodin'izy ireo any ivelan'ny fivarotana sy kafe izany indraindray dia avadik'izy ireo fotsiny ny bisikiletany, izay zavatra iray ataon'ny iray amin'ireo mpangalatra ireo tsy manahirana kokoa ny mandeha sy mitondra azy miaraka aminao.
Miankina amin'ny alehanao sy ny habaka anananao ao am-paosinao ohatra, azonao atao ny mitondra zavatra toy izao aminao, zippera saika indostrialy io raha tianao. Avy amin'i Hiplok izy io ary misy hidin-trano miharo aza. Mandehana mitaingina kafe fa mety kely loatra ny hidirana ao am-paosin'akanjonao, na na dia mitaingina lamasinina aza ianao izay tsy ahafahanao mijery ny bisikiletanao foana, mandatsaha mpangalatra ary mankanesa aminay, raha misy voahidy ny bisikileta ary ny iray tsy, ny mpangalatra dia toa mandray ilay kinova tsy voavaha.
Ankehitriny ianao dia afaka manao fikafika kely hafa amin'ny alikaola amin'ny alàlan'ny fehikibo fiarovan-doha sy ny fehikibo ho fanidiana vonjimaika sy ireo namako bisikileta, manana fitsipika izahay, tsy misy aroloha eo amin'ny latabatra cafe. Ka maninona raha ampiasaina amin'ny antony? Ka afatory manodidina ny fantsom-baravarankely izy, apetaho amin'ny zavatra tsy afaka mihetsika ianao. Ka raha manandrana maka azy ilay mpangalatra dia tsy afaka. (mozika mampihetsi-po) Izao tonga ity farany nugget kely avy amin'ny mpiara-miasa amiko Ollie izay nilaza fa maninona tsy mahazo taratasy, apetaho eo amboniny ny antsipirihanao rehetra, atsofohy ary atsofohy ao anaty iray amin'ireo fantsom-baravarankely, atsofohy ao anaty fantsona ambony ohatra. , avoahy ny fork ary manao zavatra mitovy.
Ka raha nangalatra indramina ny bisikiletanao saingy soa ihany fa mila hitan'ny polisy ianao rehefa mila mamantatra azy io amin'ny fomba ofisialy, dia azonao atao ny milaza amin'izy ireo hoe aiza no nanafenana ilay naoty ary manaporofo fa anao tokoa izy io. Avy eo mazava ho azy fa azonao atao ny mangataka amin'ny namanao iray mba hikarakara ny bisikiletanao rehefa mijanona ao amin'ny fivarotana kafe ianao, rehefa miditra ianao ary mahazo zavatra, ary ny mifamadika amin'izany, mba ho azo antoka kokoa. Ity izahay, hacks fiarovana roa, mba hijanonan'ny avonavona sy ny fifalianao ho azo antoka kokoa rehefa miditra haingana ianao hisotro kafe sy mofomamy kely.
Manantena aho fa nankafizinao izany, azafady mba ampahafantaro ahy, na dia mijanona fotsiny ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra etsy ambany ny hacks fiarovana anao. Ary tadidio ihany koa ny fitiavanao sy hizaranao an'ity lahatsoratra ity amin'ny namanao, aza adino ny mijery ny fivarotana GCN ao amin'ny shop.globalcyclingnetwork.com, manana zavatra betsaka hanandramanao izahay.
Ary izao ho an'ny lahatsoratra tsara iray hafa, amin'ity indray mitoraka ity, ahoana no fomba fiasan'ny freewheel? Ahoana no fiasan'ny karazana freewheels samihafa? Kitiho eto ambany fotsiny.
Inona no ataon'ny polisy momba ny bisikileta halatra?
Mety hieritreritra ianao hoepolisydiaAzatsy misy. Mety hieritreritra ianao fa mandany fotoana fotsiny. Fa ny zava-misy dia efa ho ny antsasaky nybisikileta halatradia azon'nypolisy. Fa raha sitrana izy ireo abisikileta halatraary efa nametraka tatitra tamin'ny laharana serial ianao, hampifandraisin'izy ireo aminao izany ary hahazo ny anao ianaobisikiletamiverina!
Okay, iza no anaranao? >> Malcolm. >> Malcom- >> Eny, manana zavatra aho- >> Inona no anaranao, Malcolm Ziegler? >> Eny. >> Okay, manana ny karapanondronao miaraka aminao ve ianao? >> Tsia, tsy izaho. >> Tsara. >> Saingy tsy izahay, tsy nitondra fiara mihitsy isika tamin'ity herinandro ity. >> Aiza ianao no mipetraka, mijanona eto ve ianao? >> Eny. >> Okay, okay. >> Vita androany tsy nitondra fiara fa tena nandalo teto fotsiny izy. >> Iza izany lehilahy izany? Iza io tovolahy mandeha an-dalambe io? >> Io no sakaizany. >> Tsara. >> Mijanona any ianao any ho any. >> Eny, olona tiako ve aho ary mandrosoa, apetraho ao ambadiky ny lamosinao ny tananao, okay? >> Inona no nataoko? >> Manana fiara nangalarina ianao. >> Inona? >> Te hijery an'ity amiko ianao. >> Inona? >> Manomeza fanampiana ahy, ralehilahy, mankanesa kely eto amin'ny fiarako etỳ >> >> Afaka mahazo ny faktiora ve aho? Amidio izy ary aseho aminao fa nividy azy aho? >> Ie, eny, eny, hikarakara izay rehetra ataon'ny olona isika.
Fa ny tokony hataonao dia ny mitazona ahy eto fotsiny, okay? >> Tsara izany, inona no nataoko? >> Tano fotsiny aho eto, okay? Ka ity no mitranga, okay? Nosoratana ho toy ny halatra ny fiara noho izany. >> Iza amin'ireo? >> Io bisikileta maloto io, ilay Suzuki. Ka fantatro fa nanandrana nivarotra azy teny amin'ny tsena Facebook ianao, okay, voalaza fa nangalatra, notanisaina ho nangalarina.
Ka manana fiara nangalarina ianao izao. >> Azoko aseho anao ve? ny fifanarahana varotra nividianako azy? >> Na izany na tsy izany, azonao aseho ahy tokoa izany. >> Ny tiako holazaina dia hoe tsy nangalatra aho fa azoko aseho anao. >> Aiza ny fifanarahana fivarotana?>> Mihevitra aho fa any an-tranoko any ho any izy. >> Eny ary, tazomy fotsiny ny zava-misy ho ahy, mba omeo sitraka aho tompoko, mandehana ary miakatra eto. >> Andriamanitro. >> 57 roa lahy, 1095 >> Handeha any amin'ny paositry ny polisy aho afaka kelikely. >> Ie, eny, eny, hazony fotsiny, tano mafy.
Avelao aho hanao izany haingana. Mila mitady anao aho, okay? Finday ve izany, any? Izaho dia apetrako eto fotsiny, okay tompoko. >> Tsara, ary avy eo misy lakile - >> Eny tompoko. >> Firy taona ianao? >> faha-14 >> Eny, hoy ianao 14? >> Eny, Tompoko >> Tsara. >> >> Eny, hoentinay ho anao izany. >> >> Eny, misy zavatra kely ao.
Tsara tompoko, omeo sitraka aho ary zarao ho ahy ny tongotrao, jereo aho fa tena haingana. Sokafy ny vavanao, tompoko, lela ambony sy ambany. Mankasitra aho.
Ary avy eo tiako ho ataonao indray ity ho ahy. >> Eh, misy inona, manamboninahitra? Tsara ve ianao? ny ray aman-dreninao ao an-trano, ralehilahy? >> Eny, ao an-trano izy ireo. >> Izy ireo- >> Azonao atao ve ny maneno lakolosim-baravarana ary miteny amin'ny raiko mba haka ny fifanarahana varotra? Ao an-trano any ho any izy io. >> Eny ary, tsy hanao izany aho - >> Hikarakara izany izahay, tompoko. >> Eny, tsara. >> Hikarakara izany izahay. >> Tsara izany, tsara. >> Mankasitraka azy.
Tompoko, afaka manokatra vava ve ianao? Lova miakatra sy midina, mankasitraka azy. >> Tsara izany, ary avelao aho hijery anao eto. >> >> Afaka mahazo ny daty marina momba an'io aho, ho hitako mandritra ny iray minitra, okay tompoko.
Ary tompoko, omeo ahy ny faharoa, miankohoka kely fotsiny. Eny ary, ho vitako haingana ity, okay? Tsara izany ary, inona no hataoko? tsy maintsy ataonao izany, asaiko mipetraka fotsiny ianao eto. Eny ary, hosokafako ny vodin'ilay >> fiaran'ny polisy. >> Manana seza ho ahy fotsiny izao, tompoko.
Mbola tsy handeha ho aiza isika. Te-hipetraka anao fotsiny aho mba tsy hiavaka eto ianao, okay, eny an-dalana. Somary lava ianao izao, ka mety ho kely- >> Mety ve ianao? >> Ny tanan-tànana. >> Inona no olana? >> Ny rojo vy. >> Eny ary, mivoaha, hamboariko ho anao io. >> >> Inona no mahazo anao? >> Ilay marina dia toy ny tena izy >> Azoko ilay izy.
Eny ary, tsara, mifikira mafy amiko. Ary tompoko, avelao aho hanao izany haingana dia haingana mba tsy hataon'izy ireo. >> Ramatoa Andrea, ento ny raiko, ao an-trano izy, maneno lakolosy fotsiny >> Mam, izahay no hikarakara izany, mahazo ny rainy izahay.
Mandrosoa ary mipetraha. >> Mbola tiako holazaina fa mandratra. >> Iza amin'izy io? >> Ity iray ity.
Mpifanila vodirindrina aminao ve izany? >> >> Okay. Te-hahazo sitraka amiko ve ianao? Mivoaka any fotsiny ary manalavitra ahy tahak'izany? Izany no ahafahako mahazo antoka fa ho avy ny fotoana. >> >> Eny.
Manana anao aho, manana anao aho Any izahay no mandeha, tsaratsara kokoa? >> >> Tsara izany. >> Mihamanakaiky hatrany izy io. >> Any isika no mandeha. >> >> >> Eny, afaka maka seza ianao. >> Raha te hitazona ny tongotrao tsy ho eo ianao, lehilahy lehibe ianao, rangahy.
Raha te hanantona ny tongotrao ianao ary mipetraka fotsiny dia azonao atao izany. >> >> Hiasa aho mba hanafaka anao ato ho ato, okay. >> Miaraha miasa foana amiko.
Ankasitrahako izany ary hamboarinay daholo izany. >> >> Ary tompoko, ary tsy milaza aho hoe nangalatra izany ianao G Vao avy naka fiara halatra izahay. Tsy miteny izahay hoe nangalatra ny fiara ianao, okay, tsy milaza izany mihitsy aho, okay? Saingy mbola heloka bevava ny fananana fiara halatra.
Ka miresaka amin'ny rainao izy. >> Raha afaka mampiasa findainao ianao dia azoko aseho anao ny toerana nividianako azy. Nihaona tao amin'ny Church of Presbyterian Lillington izahay.
Fantatrao hoe aiza izany? Tonga eto ny rainao. >> Tokony ho tamin'ny 8 ora sy sasany no nifankahita izahay. >> Hey, manao ahoana ianao, tompoko? >> Dada, mila ny fifanarahana varotra aho >> Ny antony tsy hidinan'io rehetra io dia satria voalaza fa nangalatra tao amin'ny Ivotoeram-pirenena momba ny heloka bevava ilay fiara.
Sendra manana ny fifanarahana varotra ve ianao, tompoko? >> Tsy haiko hoe aiza io. Na ao amin'ny efitranoko na any amin'ny garazy. >> Ianao tsy maintsy milaza amiko aho hoe aiza izany.
Nahita anao tany ivelany aho fa inona no azonao Inona no anaran'ilay bandy nivarotra anao tamin'ny bisikileta? >> Heveriko fa Tony na zavatra hafa. Raha mandeha amin'ny telefaonako ianao dia afaka mijery ny piraofilina Facebook. >> Ny fifanarahana varotra ve? >> Jereo ny kaontera e ary jereo raha misy izany. >> Kaontera inona? >> Ao an-dakozia, ilay voalohany dia manana izay rehetra ametrahanao ny mailaka. >> Raha tsy eo izy dia mijanona amin'ny garazy, fantatrao izay misy ny fitaovana fampidinana rivotra? >> Ka inona no hitranga amiko eto, toy ny hoe manodidina anao manodidina ianao? >> Ka ny zavatra tokony ho hitantsika izao dia ny fahitantsika ny fifanarahana varotra. >> >> Amin'izao fotoana izao dia manandrana mikarakara azy aho satria tompony ianao, midika izany fa mbola ara-teknika ilay manana fiara halatra.
Nefa mazava ho azy, raha misy ny fifanarahana fivarotana ary raha manana ianao? Raha lazainao amiko fa marina dia vonona izahay hiara-miasa aminao. Ary- >> Eny, ny tiako holazaina dia mino aho fa handray an'izany rehetra izany ianao, ento ny bisikileta. Azoko ve ny vola laniko? ny bisikileta? >> Ka izao, ry vadiko, tsikelikely mandeha.
Ny zavatra tsy maintsy ataoko dia ny mahazo fampahalalana vitsivitsy aminao, soraty ny anaranao toy izany tompoko, Malcolm io, marina ve izany? >> MAL. >> Tsara. >> COLM. >> COLM, gotcha, Ahoana no fomba hanoratana ny anaranao, Tompoko? >> ZIGLAR. >> Ary daty nahaterahana? Ary avy eo dia nilaza ianao fa 14 taona? >> Ie, tsy maninona, tsara daholo. somary tsy mitovy ihany ny fizotrany.
Ka tsy hataonay any am-ponja ianao na zavatra hafa. Mila miresaka amin'ity manamboninahitra ity fotsiny aho. Jereo izay azony.
Miasa izy ireo hahazoana ny faktiora amidy ary avy eo mandroso izahay, okay. >> Tsara. Misy fomba azonao andehanana amin'ny findaiko ve mba hahafahako mampiseho anao ny toerana nihaonako tamin'ilay tovolahy sy ny zava-drehetra? >> Ka tano mafy ho ahy fa manamarina ny fifanarahana varotra izy ireo.
Rehefa vita izany rehetra izany, hiara-hiasa aminao izahay, okay? >> Dada, misy maromaro amin'izy ireo. Misy mpivady roa. >>>> Izay no lazaiko, tokony eo amin'ny kaontera izay misy ny mail rehetra raha tsy izany dia ho ao amin'ny efitranoko. >> Aiza ny efitranonao? >> Raha na aiza na aiza ato amin'ny efitranoko dia ho vantany vao mandeha ianao, raha mankany amin'ny efitranoko ianao dia tokony ho eo ambony latabatra fandriana d.
Fa azoko antoka fa napetrako teo amin'ny latabatra fandefasana mailaka izany. Tompoko, manana kopian'ny zava-drehetra ve ianao? Hitako manana zavatra eo ianao. >> Ireo no nofenoiny fotsiny satria te hivarotra azy. >> Tsy maninona aho, okay. >> Fa izahay mitady an'izany, avy taiza no nahazoantsika ilay bisikileta?>> >> Fantatro hoe taiza, inona no roa herinandro lasa izay?, >> Herinandro lasa izay tamin'ny Alarobia na Alakamisy. >> Ka izay no angatahiko.
Aiza ny? Tsy nanao sonia iray ve ilay tovolahy? >> Eny, nanoratra iray izy. Jereo fa azoko antoka fa eo no hametrahanao ny mailaka amin'ny latabatra. Nijery teo ve ianao? >> Ao anaty lava-bato? >> Tsia, heveriko fa tsy ho tao anaty lava-bato izy, ho tonga teo amin'ny toerana iray izy. >> Fantatro fa tsy io no mety indrindra amin'izao fotoana izao, fa horoahinay hiala haingana ianao, okay? >> Eny, mila ny nomeraon-telefaon'ilay rangahy nividianako azy fotsiny? Satria azoko omena anao ny findainy. >> Atsaharo izao, okay, ary hiroso isika afaka kelikely.
Ie, eny, eny, ka raha mandeha fotsiny ianao dia apetraho amiko ny tongotrao mandritra ny segondra. Tsara izany anananao izany? Efa akaiky eo isika. >> Inona ny kiraro habeny anaovanao, toy ny 14? >> >> Eny, mitafy 14. >> Eny ary, tazomy tsara aho rangahy, okay? >> Gadraina ve izy sa >> efa nigadra fotsiny, satria 14, >> 14? >> Eny. >> Tsara. >> Eny, efa nohazavaiko taminy fa gadraina izy izao, nolazaiko azy izany. >> Fa maninona izy no voasambotra? >> Fiara halatra ity. >> Eny, ka- >> Ny tiako holazaina dia nanamarina ny VIN i Dave, sa tsy izany? >> Izany ve taloha, nohamarininao teo alohanao- >> Nosamboriko izy dia nohamarininay avy eo. >> Eny ka izany no nanontaniako raha gadraina izy. >> Nogadraina izy >> Eny ary mazava ho azy fa tanora izy, sa tsy izany? >> Ie. >> Tsy miampanga azy ho nangalatra a- >> ianao. >> Eny, satria tsy izany no nitranga taminao. >> Ie. >> Ka ny zavatra ratsy indrindra azonao ve? >> Fananana fiara halatra. >> Inona no hataonao, mieritreritra ianao fa hahazo fiambenana azo antoka sy izany rehetra izany? >> Mety tsia. >> Na fanangonan-tsonia >> Eny, tsy handeha ho any 14 manokana aho.
Henonao izay dada, tsy misy antony avelany mifatotra tànana ao anaty fiara izy. >> Raha 18 izy ary afaka naka iray tamin'ny fananana halatra, Anders. Tsy hampiditra azy any am-ponja ianao, marina, ho fanangonan-tsonia izany. >> Mm-hm.
Hamono azy aho, manontany anao. Toa fantatro fa miasa amin'ny fahazoana fifanarahana fivarotana izy ireo. >> Tsy nametraka fanontaniana taminy aho fa nikatona ny vavany izy.
Nilaza izy fa nahazo izany tamin'ny lehilahy iray tany Wellington, okay? Ny zava-drehetra dia fantatro ara-dalàna fa mbola afaka enjehina izy. >> Raha manana fifanarahana fivarotana izy manokana, izaho dia nihalehibe tamin'ny bisikileta maloto tamin'ny kodiarana efatra. Manana telo ato an-trano aho izao. >> Tsy mbola nihazakazaka mihitsy aho raha tsy polisy.
kitapo kitapo azo ahodina
Ny ankamaroan'ny olona dia nangalatra iray. Mahazo fifanarahana fivarotana ianao ary mieritreritra fa tsy angalarina izany satria manana fifanarahana varotra ianao ary marina ny VIN. novidiny ho antsika izy io, mividy bisikileta misy olana izy, manamboatra sy mivarotra azy.
Izay no ataony. Ho ahy manokana dia omeko ny Harnett County izany rehetra izany. >> Tsara. >> Raha manana fifanarahana fivarotana izy, dia ny tiako holazaina- >> Tsy hanao peti-bola ianao? >> Amin'ny ankapobeny, milaza ianao raha manana fifanarahana fivarotana izy dia tsy hiafara amin'ny fanangonan-tsonia. >> Tsia, - >> Eny, mazava ho azy. >> Hey, aiza no eritreritrao, aiza no misy ny fifanarahana varotra? >> Afaka mivoaka ianao, esorinay ny fonosana. >> Aiza ho aiza no misy ny fifanarahana fivarotana? ny varotra mety ho? >> >> Ie, fantatro fa nandroaka ny dadanao. >> Tompoko, omeo sitraka aho, mandrosoa, ary zarao kely ny tongotrao, zarao koa ny tongotrao.
Mandrosoa mba hahazoako ny lakile, okay? >> >> Saraho koa ny tananao. >> >> Saraho ny tananao. Mandehana. >> >> Tsara, tohizo ary raiso ho ahy ilay tanana, tompoko. >> Iza? Ity dia anananao. >> mitady azy.
Ataoko eo ambony latabatra ao amin'ny efitranoko izy ireo. >> Nojereko ny birao, ny. >> Eny, afaka miditra miaraka aminy isika ary. >>> Afaka miditra miaraka aminao aho. >> Toetra iray. >> Eny.
Ahoana no fomba hahitako ny bisikileta nangalariko?
Ireto misy torohevitra vitsivitsy haingana sy moramanara-masomidina io:
Tatero nybisikileta nangalarinaamin'ny polisy.
Miantso eo an-toeranabisikiletafivarotana.
Tsidiho ny tsena eo an-toerana sy tokotanin'ny fidiranabisikileta halatra.
Soraty nybisikiletatoy nyangalarinaamin'nybisikiletatranokala fanarenana.
Mikaroha tsena an-tserasera.
Ampahafantaro ny orinasanao fiantohana.
Aparitaho ny teny.
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny AirTags avokoa. Fantatrao, ireto chips kely miendrika vola kely vaovao ireto izay mifandrindra amin'ny tamba-jotra Apple FindMy hahafahanao manaraka ny fanalahidinao, na ny kitaponao, na zavatra hafa mety ho very anao. Betsaka ny lahatsoratra nataon'ny olona mampiseho ny fiasan'ny AirTags ao an-tranony, saingy tsy mbola nahita fitsapana an'izao tontolo izao niaraka tamin'ny entana very aho.
Fa tsotra ilay hevitra: handeha hitety ny fariboboky ny oniversite miaraka amin'ny namako Collin aho, hanafina zavatra roa izy mba hahitako sy hahitako azy ireo, ary ninia namela AirTags roa alina aho hijery raha naverina izy ireo na hahita fotsiny ny ampitson'iny. Tsy afaka naminavina mihitsy aho hoe tena hisy marina tokoa ity fitsapana ity. Nandray anjara lehibe ity lahatsoratra ity.
Sahabo ho roa kilaometatra eo ho eo izao. Dia izay! dia izay! dia izay! Oh, ao izy toy ny sabatra. Tsy hanenjika aho.
Miala tsiny, heveriko fa very ity valizy ity omaly
Fa teny voalohany avy amin'ny mpanohana anay Elago. Elago dia nandefa zavatra vitsivitsy tao amin'ny fanangonana MagSafe ahy ary lasa haingana izy ireo no fomba tiako hibaikoana ny fitaovako. Ny duo hub d'exploitation dia fomba mora iray hamahana ny iPhone sy Airpods anao na iPhones roa miaraka.
Avy eo koa ny fijoroana miampanga MS2. Izany dia toy ny mitsinkafona ny telefaoninao satria miraikitra amin'ny charger MagSafe izy io, ary ampiasaiko ho toy ny fikojakojakojakojakoako eo am-pandriana isan'alina. Ary farany, ny tiako indrindra dia ny fihazonana.
Io dia mijoro ho toy ny fijoroana kely hanohanana ny telefaoninao ary handefasana azy miaraka amin'izay, ary apetrako ao an-dakoako ity hijerena podcast rehefa mahandro aho. Ary ireto dia zavatra vitsivitsy fotsiny avy amin'ny fanangonana. Mbola misy safidy sy loko maro hafa azo isafidianana ao amin'ny tranokala hahafahanao misafidy ny fomba mety indrindra aminao.
Raha liana ianao dia afaka mahita ny rohy amin'ilay famaritana etsy ambany. Miverina amin'ny lahatsoratra indray izao. Eny ary, ny zavatra momba an'ireto AirTags ireto dia ny tokony hitoerany amin'ny toerana be olona rehefa miasa izy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo amin'ny iPhones an'ny olon-kafa.
Eny ary, avelantsika eto izy ary antenaina fa hisy olona hanatona ary ny iPhone-ny no handefa azy io. Saingy avelantsika eto mandritra ny ora roa farafahakeliny. Eny ary, ny voalohany amin'ireo dia ndao afenintsika anaty kirihitra sasany hahitanao raha hitanao izany.
Eto marina. Ho an'ny iray manaraka, eh, miakatra avo isika, ka hiakatra hazo iray. Eny ary, manantona eo amin'ilay sampana.
Belkin mainty, avelantsika eo amoron'ny banky fotsiny izy. Eny ary, 40 minitra teo ho eo izay no nametrahako ny AirTag farany. Manokatra ny app My FindMy aho ary jereo raha hita izy ireo.
Tsy maintsy nilatsaka sy nilatsaka an'i Collin aho, tsy nilaza tamiko ny toerana nisy izy fa ho hitantsika ao amin'ny FindMy izany ary antenaina fa nohavaozina izy ireo. Andao hiroso amin'ny app FindMy. Eny ary, tao anaty 10 minitra farafahakeliny ny entana rehetra.
Toa mbola teo ilay farany navelantsika teto amin'ity banky ity, mbola eo ny valizy, ary avy eo dia ireto roa ireto no tokony ho sisa tavela tamin'i Collin. Mino aho fa io no Belkin AirTag fotsy, ary ity iray hafa ity dia tokony ho ilay AirTag vita amin'ny hoditra Apple. Ka vaovao tsara tokoa ity, mampiseho fa mahery ny tambajotran'i FindMy an'i Apple, farafaharatsiny any amin'ny faritra be olona.
Ka ankehitriny dia antenaiko fa ho hitako ireo roa navelan'i Collin teo aloha, ary avy eo isika dia mety handao ny roa hafa mandritra ny alina, angamba ora maromaro kokoa, ary hijery raha misy maka azy ireo ary manandrana mampandre ahy. Eny ary, niantso ny lalana izahay ary amin'ny ankapobeny Google Maps (Apple Maps) ihany no aseho raha lavitra ny AirTags ianao. Okay, 3m, 3m miala.
Tsy maintsy misy eto amin'ny toerana iray io. Okay, eo ankaviako. Andao handeha, eto amin'ny toerana hafa io.
Eo izany. Eny ary fa mora kokoa noho izany ny hitako, nafenina tsara izy io saingy marina tsara ny làlan-kaleha ary rehefa tafiditra ao amin'ilay faritra ahafahanao mampandeha ity mpikaroka toerana marina ity aho dia mila mamantatra ny tena dikan'ny hoe 'marina. karohy 'ary mifanaraka amin'ny iPhone 11 sy ny vaovao kokoa. Manamora ny fanaovana azy io fotsiny.
Nahita azy aho tao anatin'ny 20 ka hatramin'ny 30 segondra. Raha miroso amin'ny entana manaraka isika dia manana ny Apple Keychain. Andao hodinihintsika ireto torolalana ireto.
Ary heveriko fa izany no fiverenany vao nandalovantsika. Ary eto dia azonao atao ny mahita ny iray amin'ireo olana vitsy nananako rehefa nahita ny lahatsoratro. Rehefa azoko ny lalana rehetra dia lavitra ny arabe ka nandehandeha tany aho, nitady azy, ary avy eo nanavao tsy ho aiza, ary niverina tamin'ny lalana hafa tanteraka aho.
Saingy taorian'ny fanavaozana azy indray dia eo amin'ny toerana marina. Eny, toa efa ho tonga eto io. Eny ary, eo alohako izany.
Aiza ilay izy
Ary tamin'izay fotoana izay, tsy dia nieritreritra ny fomba hikapohana ny bokotra fandefasana feo fotsiny aho izay mahatonga ny AirTag hanomboka haneno ary ho hitako tao anatin'ny segondra vitsy, ka afaka nandany iray minitra na very maina fotsiny aho nitady azy . Okay, iray metatra lavitra, ah, eo izy. Ity dia toerana fierena tsara hafa, saingy tsy dia tsara loatra ho an'ny AirTags.
Ie, hotapahiko tokoa izany. Heveriko fa hiandry ny entana roa manaraka fotsiny isika mandritra ny alina ary manantena aho fa hisy haka azy ireo ary hieritreritra fa very izy ireo ary manandrana mamerina azy ireo amiko. Eny ary, ity lahatsoratra ity dia nihodina be fotsiny, tsy izany no nandrasako voalohany, fa toa ny valizy navelako tany ivelany no nalaina tokoa.
Tsy hiteny aho hoe nangalatra izany satria tsy azoko antoka raha te hamerina azy ireo izy ireo, saingy raha ny fikarohana nataoko dia manodidina ny roa kilaometatra ny elanelany amin'izao fotoana izao toa ato amin'ity valan-javaboary Santa Rita Park ity aho ' efa teo aho teo aloha, teo amin'ny toerana nisy ny trano fonenako taloha, ka ny tetika dia ny haka an'i Colin namako eto afaka adiny iray eo ho eo ary mandehana any ary jereo fotsiny ilay toerana ary jereo raha hitako ilay kitapo. Soa ihany fa tsy misy zavatra sarobidy ao anaty kitapo, ny hajia fotsiny ary ny kitapom-batsy dia foana foana. Tsy olona mifanditra aho ary raha nandray an'io fihemorana io ianao dia fantatrao angamba fa mila izany bebe kokoa noho ny hitako izy ireo mahita fa ny lakilen'ny lakilasy farany navelako nandritra ny alina dia mbola eo.
Azoko antoka fa raha niverina nizotra tamin'ity toerana ity aho dia teo akaikin'ny dabilio fotsiny izy ireo, ka angamba haka ny lakileny haingana aho ary avy eo mitodika mba hahita ilay kitapo. Andao handeha, sahabo ho iray kilaometatra avy eo ary handeha fotsiny isika hijery izay mitranga. Manantena aho fa mbola eo izy noho ny antony sasany.
Efa noheveriko ny fomba ratsy mety hitrangan'izany, hahaliana izany, farafaharatsiny fisedrana antonony tokoa, toy ny famerenana teknika, ary nahemotra tanteraka izao. Jereo raha hitanao izany Tsia, hanao loop aho, angamba amin'ny alàlan'ny valan-javaboary eny, tadiavo fotsiny, dia izay, dia izay, oh lasa toy ny sabatra izy tao hitanao io, tsia, nanana antsy lava izy io, zavatra nisy tanany lehibe tsy hitako ilay lelany na zavatra nampatahotra anao indrindra tokony ho nangatahiko oh eny ahoana raha misintona antsy ahy izy na mandeha mandeha haingana ka ho hafa aho iray Loop mahita ny lelany miala tsiny um fa heveriko fa very ny kitapom-batsy omaly dia azonao atao ny mitazona ilay kitapo fa tsy maninona fa manana chip kely fanarahana aho mahita azy ireo nivoaka toy ny ampahany kely mihantona mainty, vokatra Apple vaovao io, io tsy hoe tsy afaka mitandrina azy io ianao, aza manahy, afaka mitazona izany ianao, tsy tonga teto ianao, tsia, nitondra fiara aho satria nitady ilay kitapo aho, toa tsy hitako fa tsy Tongava amin'ny anadahy kambana tsia tsy misy olona tonga teo alohany dia nitovy taminao oh tsy dia be loatra oh azo antoka eny, tsy nandalo aho alohan'ny andro tsara dia mirary tontolo andro mahafinaritra dia mirary tontolo andro mahafinaritra misaotra betsaka anao Mission acc misaotra noho ny Air Tag ka nandeha soa aman-tsara ny zava-drehetra mbola tsy azoko antoka hoe inona no tian'ilay tovolahy kambana holazaina fa tamin'ny faran'ny andro dia afaka nanandrana ny fanarahan-dia tamin'ny tena scenario aho. naveriko ny mari-panafiko ary nahazo kitapo kitapom-batsy ity lehilahy ity ary fandresena izany ka fantatro fa lalana tsy dia mahazatra loatra io famaranana io fa tsara ny tagy an'habakabaka satria be ny olona manana iPhones mifandray mahita ny ahy.
Tahaka ny fanananao tambajotran'olona tsy mitsahatra manandrana manampy anao hahita ny lahatsoratrao ho anao. Raha ny hevitro, ny tag ny rivotra dia azo antoka fa mihoatra ny vokatra demo mahafinaritra fotsiny. Zahao ny lahatsoratra manaraka
Iza no antsoiko raha halatra ny bisikiletako?
Inona noataovy rahanybisikileta angalarina
Hampandre izany any amin'ny polisy.antso101 ary mangataha hiresaka amin'ny polisy eo an-toerana.
Mikaroha ny faritra manodidina.
Araho maso tranokala an-tserasera hanarahana nybisikiletamidina.
Fa maninona no mangalatra bisikileta ny mpangalatra?
Matihanina kokoampangalatrate-hahazo vidiny tsara kokoa, ary manana bebe kokoabisikiletahivarotra, ka tsy afaka mampiasa tetika mitovy amin'izany izy ireo. Lasibatra lafo kokoa izy ireobisikiletaary matetika hiezaka hamidy azy ireo an-tserasera mba hahazoana vidiny tsara kokoa.11 Oktobra 2018
Mendrika ny mitatitra bisikileta nangalarina ve?
Raha ny 4% fotsinybisikiletasitrana, zava-dehibe ny fisian'ny tarehimarika marimarina mba hahafahan'izy ireo mizara loharano hiadianabisikiletaheloka bevava. Ao amin'nyLONDRESmety ho izany koamendrika hotaterinanyhalatramankany amin'ny Task Force Cycle. Ny tsara indrindra dia asio sarinaobisikileta halatra.18 Sep 2012
Mitady bisikileta halatra ve ny polisy?
Olan'ny fiainana-kalitao ho an'ny fiarahamonina misy azy ireo arybisikileta halatradia matetika ampiasaina ho toy ny fiara hanao heloka fanampiny. Noho ireo antony ireo, ary satriabisikiletafefy matetika, polisyAzamisambotra isa tsy mampinobisikileta- tsy fahita firy ny tanàna lehibe mamerina 1.000 na 2.000bisikiletaisan-taona.19 Jul 2017
Fa maninona no tsy mahita olana ny bisikiletako?
Raha mahafeno ny fetrany ny motera na manomboka manomboka mitranga ny fandoroana na fandoroana tsy mahomby dia hanomboka tsy hahita izy avy eo.
Azonao atao ve ny mijery nomeraon-dahatsoratra bisikileta?
Azonao atao ve ny mijery nomeraon-dahatsoratra bisikileta? Eny,mijery ianaonylaharana serial an'ny bisikileta.izy ireomatetika dia eo ambanin'ny anaobisikiletafonosana ambany.25 apr 2021
Ahoana no hahitako raha nangalatra ny bisikiletako?
Raha vantany vao azonao ny laharana nomerao dia soraty amin'ny Bike Index na any amin'ny fisoratana anarana eo an-toerana ny bisikiletanao. Ny Bike Index dia mahatonga ny bisikileta halatra ho sarotra hivarotra ary ho mora sitrana amin'ny alàlan'ny fanaovana izay hahitana sy hifandraisana amin'ireo tompona bisikileta halatra. Tsotra, azo antoka ary maimaim-poana ny fizotrany. Izy ireo dia efa nisoratra anarana bisikileta 60.623 ary nahatratra 2.689 bisikileta halatra.
Misy vondrona Facebook hamerenana amin'ny laoniny bisikileta nangalarina?
Nisy tranga iharan'ny herisetra na famonoana olona te hamerina ny entany. Raha mipetraka amin'ny tanàna misy vondrom-piarahamonina bisikileta lehibe ianao dia misy vintana tsara hananganana vondrona Facebook ny mponina ao an-toerana hamerenana ireo bisikileta halatra.
Ahoana ny fomba fitaterana halatra bisikileta any UK?
Azonao atao ny mahita ny tobinao eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fitsidihana http://www.police.uk/. Raha ny tokony ho izy dia mila marika isa sy tag ianao raha manana iray. Raha manana fiantohana bisikileta ianao, dia mila manao tatitra momba ny halatra ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fahitana. Ny nomeraon'ny heloka bevava homen'ny polisy anao, ampiarahina amin'ny tapakila ho an'ny bisikiletanao dia hanampy anao hanao fitakiana.